Inkcazo yoBalo bukaThixo ebuKristwini
Uthando lukaThixo luthetha kumaKristu
Ubabalo uthando olungasifanelanga kunye noThixo
Ububele, obuvela kwiLizwi lesiGrike iTestamente elitsha charis , luthando lukaThixo olungenakuthathwa. Kububele bukaThixo ukuba asifanelanga. Akukho nto esikwenzileyo, kwaye akunakwenzeka ukuba senze le nto. Yisipho esivela kuThixo. Ubabalo uluncedo lukaThixo olunikezwa ngabantu ngenxa yokuvuselelwa ( ukuzalwa kwakhona ) okanye ukungcwaliswa ; ubuhle obuvela kuThixo; isimo sokungcwatshwa esiyintanda ngoThixo.
I-Webster yeNew World College Dictionary inika le nkcazelo yenkolo yobomi: "Uthando olungenakulinganiswa noluthando lukaThixo kubantu, impembelelo kaThixo eyenziwa kumntu ukuba ahlambulule umntu, aqiniseke ngokuziphatha; mpe mbelelo, isipho, okanye isibonelelo esinikwe ngumntu nguThixo. "
Ubabalo lukaThixo Nenceba
EbuKristwini, ubabalo lukaThixo nenceba kaThixo zihlala zididekile. Nangona zibonakalisa izinto ezifanayo zokuthandwa kwakhe nothando, zineenkcukacha ezicacileyo. Xa sibona ubabalo lukaThixo, siyafumana ukuthanda ukuba asifanelanga. Xa sifumana inceba kaThixo, asiyihlwayo esiyifaneleyo.
Ubabalo lukaThixo luyamangalisa ngokwenene. Akunalo kuphela ukubonelela usindiso lwethu, lusenza sikwazi ukuphila ubomi obuninzi kuYesu Kristu :
2 kwabaseKorinte 9: 8
Kwaye uThixo unako ukwenza ubabalo lonke lube lukhulu kuwe ukuze ube nakho konke okwaneleyo kuzo zonke iimeko ngamaxesha onke, unokwanda kuyo yonke imisebenzi emihle.
Ubabalo lukaThixo lufumaneka kuthi ngamaxesha onke, kuyo yonke ingxaki kunye nesidingo esinokujamelana nayo. Ubabalo lukaThixo lukhulula ebugqilini besono , inetyala, kunye neentloni . Ubabalo lukaThixo lusenza sikwazi ukuphishekela imisebenzi emihle. Ubabalo lukaThixo lusenza sibe yinto yonke uThixo afuna ukuba sibe nayo. Ubabalo lukaThixo luyamangalisa ngokwenene.
Imizekelo yobomi eBhayibhileni
Yohane 1: 16-17
Ngokuba ekuzaleni kwakhe sonke samukelwanga, ubabalo lubabalo.
Kuba umthetho wanikwa ngoMosis; Ubabalo nenyaniso kwavela ngoYesu Kristu. (ESV)
KwabaseRoma 3: 23-24
... kuba bonke bonile kwaye bawela kuzuko lukaThixo, kwaye balungisiswa ngobabalo lwakhe njengesipho, ngokukhulula okukuKristu Yesu ... (ESV)
Kuba isono asiyi kuba negunya phezu kwakho, kuba awukho phantsi komthetho kodwa phantsi kobabalo. (ESV)
Efese 2: 8
Kuba ngobabalo ulondolozwe ngokholo. Yaye oku akukwenzi kwakho; sisipho sikaThixo ... (ESV)
Kuba ubabalo lukaThixo lubonakale, lusindisa bonke abantu ... (ESV)
Amandla okuphilisa okuhleka
Iingqungquthela Ngokuphathelele Inyaniso YesiKrisimesi
Uqeqesha Amandla Wami Imfazwe - INdumiso 144: 1-2
Iindumiso 118: I-Chapter Chapter yeBhayibhile
Iintlobo zeeNgxowa-ndlebe zeZikolo zonyango
Izixhobo zoMculo zomculo: Igalari
Indlela Yokwakha Umgama Wakho Wokuqeqesha Usuku
Incwadi ka Hagayi
Icandelo lokutyunjwa kwisiLatini
Umgaqo-9: Ulwazi malunga neentambo ezithathwe (iMithetho yeGolf)
Iincwadi zesiLwimi eziNgciniweyo kunye nokubizwa
I-Enthalpy yeNtsebenzo Inkcazo
Njani, nini, kunye nantoni na ukusetyenziswa kwe-Accents kwi-Capital Capitals
Imiphumo Yokugqibela: Ukuzilungisa?
Funda indlela ama-Aphids anokukhawuleza ngayo ukujikeleza umyezo wakho
Ubukhulu bokuqala beNkundla ePhakamileyo ye-US
Ukholo alupheliyo: Ukholo alukho uMthombo wolwazi
Kutheni uMthetho weNguqulelo yeCongress Will Never Pass
Iingcaphuno ezivela kwi-Five Malcolm X IiNtetho
Indlela yokuCima nokuPhela iPulazi yokuLungisa iGlasi
Yintoni i-El Nino?
Ukuqonda indlela yokuHlanganisa i-Sessile Organism